Amboary ny solosaina miverina fa tsy misy hita eo amin'ny efijery - Ikkaro
firosoana >> fanamboarana >> Mihodina ny solosainako fa tsy misy hita eo amin'ny efijery
Izany no nitranga tamiko tamin'ny PC efa sivy taona. Manomboka ny solosaina fa tsy misy hita eo amin'ny efijery. Manazava ny fomba hamaritana ny lesoka aho hahitako izay tsy mandeha, satria toa lesoka iraisana io.
Matetika ny tsy fahombiazana dia avy amin'ny iray amin'ireo toerana 3 ireo:
Voalohany indrindra zahao fa TSY manana USB, cd, smartphone, famantaranandro, fitbit, na fitaovana hafa mifandraika amin'ny solosaina ianao. Raha manana zavatra mifandray ianao fa tsy totozy, fitendry ary mpandahateny, esory izany ary manandrama manomboka indray. Imbetsaka isika no manadino zavatra mifandraika ary raha manana BIOS namboarina handefasana amin'ny kapila ivelany isika dia manandrana manatanteraka azy ary manome ny lesoka.
Raha tianao ity fanamboarana ity dia zahao ity fikafika ity mamoha smartphone miaraka amin'ny efijery vaky.
Izahay dia manamarina raha mandeha ny efijery. Toa bontolo ilay izy, fa zavatra ariana kosa. Hatramin'ny tsy fahombiazana noresahintsika dia mandeha ny solosaina, manomboka izany, ka mety ho mandeha tsara ny zava-drehetra nefa simba ny efijery.
Tsotra be ny fitsapana azy io, ampifandraiso ny solosaina finday na fitaovana hafa misy HDMI na raha misy fahitalavitra ny monitor, andramo jerena raha mandeha. Raha ny mahazatra dia hahazo hafatra No Signal isika, ary amin'izany dia efa fantatsika fa diso ny hadisoan'ny efijery.
Raha misy modely RAM nampifandraisinao simba na tsy mifandray tsara, satria efa nivoaka izy io, satria misy loto ary tsy mifanerasera tsara dia afaka mahita an'io olana io koa izahay.
Diovy ny vovoka, ny filamatra dia amin'ny rivotra voahidy ary raha mahavariana amin'ny borosy manohitra ny static isika. Fa amin'ny borosy mahazatra dia tsy hanana olana koa ianao.
Ovao ny modules slot. Andramo tsirairay izy ireo hahitana raha tsy mahomby izy ireo.
Ny karatra sary na GPU
Ny safidy manaraka dia ny graf. Tsy maintsy esorinao izy io, diovy amin'ny borosy ny fifandraisana ary andramo indray raha toa ka mandeha izany.
Alohan'ny hividianana sary hafa dia anontanio ny namana iray ho an'ny efa antitra mba hahitana fa tena izy no tsy mety.
Ahoana ny fanamboarana ny sary
Na dia tsy tanjon'ity lahatsoratra ity aza aho dia mamela famantarana kely.
Raha simba io dia diovy tsara ny mpankafy ary heatsink tsara, esory ary ovay ny paty mafana. Jereo raha misy singa iray ao anaty toe-javatra ratsy izay azo soloina na solder ratsy.
Ary farany raha tsy vitantsika ny mampandeha azy Azontsika atao ny mieritreritra ny hanao fitaratra izay hampianariko hatao amin'ny lahatsoratra hafa.
Diagnostika momba ny hadisoana amin'ny motherboard
Ireo motherboard dia manana Diagnostika fahadisoana izay ilazany amintsika izay tsy mandeha. Izy io dia azo jerena amin'ny LED amin'ny bokotra herinaratra, na dia eo am-peo aza ny zavatra tsotra indrindra, ny feo avoakany rehefa misy olana.
Raha mandeha tsara amin'ny PC-nay ny zava-drehetra dia heno ny bip ary mitohy miasa ny solosaina.
Raha misy zavatra tsy mahomby dia mitora-peo izy araka ny filaharana, 2 vava, 2 lava ary iray fohy, 3 vava sns ... ary amin'izany no ahalalantsika ny ampahany amin'ny solosaina tsy mahomby
Ankehitriny, ny ankamaroan'ny olona dia mitady Internet amin'ny famaritana am-peo ary amin'ny pejy tsirairay dia mahita dikany samihafa amin'ny bip izy ireo. Izany dia satria miankina amin'ny BIOS anananao.
Ka ny fomba fiasa marina dia:
Fantaro izay motherboard anananao. Raha jerena izany, na satria efa voatahiry ny boaty na faktiora fakana vola.
Raha vantany vao azonao izany dia ampidino ny boky Manual ny takelaka tadiavinao ao amin'ny Google (ny maodelin'ny filetype Manuale plate: pdf)
Avy eo dia tadiavo hoe aiza ilay kaody hadisoana. Mikaroka ao anaty ilay boky hoe "bip" aho ao anaty pdf ka segondra vitsy no hitako matetika.
Amin'izany no ahazoanao antoka fa ny diagnostika azo antoka izay mifanaraka amin'ny hadisoanao
Indraindray, toy ny tranga misy amiko, ny solosaina dia tsy mamoaka feo satria tsy misy buzzer napetraka. Takelaka maro no nampidirina azy io fa ny hafa kosa tsy tafiditra, niditra tao anaty boaty izy ary notehiriziko.
Raha sendra anao ny zavatra mitovy amin'izany dia tadiavo izany, anontanio ny namanao iray na mividiana iray izay tsara foana an-tanana na avelao hipetraka eo amin'ny PC io. raha te hahalala hoe aiza no hametrahana azy dia jereo eo amin'ny lovia izay milaza hoe buzzer.
Ahoana ny fametrahana rindrambaiko APK amin'ny Android
Vahaolana: avrdude: ser_open (): tsy afaka manokatra fitaovana amin'ny Arduino
Ahoana ny fomba fampandehanana rakitra .sh
Sokajy fanamboarana Ticket navigation
1 Ny efijery
3 Ny karatra sary na GPU
3.1 Ahoana ny fanamboarana ny sary
4 Diagnostika momba ny hadisoana amin'ny motherboard